Global Voices teny Malagasy » Sriracha, Saosy Vietnamiana Malaza Eran-tany Feno Fitiavana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2016 4:56 GMT 1	 · Mpanoratra Loa Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna
Sriracha Saosy Chili Masiaka. Sary avy amin'ny pejin'i Mike Mozart ao amin'ny Flickr , nahazoana alàlana CC
Navoakan'ny Global Voices eto indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ity lahatsoratra  avy amin'i Chi-Linh Đinh tao amin'ny Loa, tranonkalam-baovao tsy miankina sy podcast izay mandefa tantara momba ny Vietnam ity.
Tao amin'ny Bánh Mì Boys aho, trano fisakafoana iray ao Toronto, Canada. Efa hariva ny andro, noana aho, ary nanafatra bánh mì asiana saosy Sriracha betsaka eo amboniny izaho sy ny namako.
Sriracha, raha toa mbola tsy fantatrao, dia tavoahangy misy saosy Chili, fantatra avy hatrany amin'ny sarony maitso sy ny sary famantarana akoholahy . Mampiasa azy io aho amin'ny sakafo rehetra, ary amin'ny sakafo sasany izay tsy tokony asiana azy akory aza angamba. Tamin'ny Halloween, nitafy tahaka ny tavoahangy saosy Sriracha aho. Mety ho tsy mahalaza azy angamba ny filazana hoe tiako ity zavatra ity. Kanefa tsy irery aho.
Nanazava ny antony hitiavany azy ihany koa ny iray amin'ireo mpiasa, na dia misy fahasamihafana kely noho ny nahafantarany azy aza ilay izy. “Heveriko, satria avy any Thailand aho,” hoy izy. “tao Thailandy no misy ny Sriracha voalohany, ilay tanàndehibe antonontonony,” hoy izy nanazava, “Fa ny [saosy] izay ananantsika dia tena tsy mitovy amin'ny tena saosy Sriracha, tahaka ny tsy masiaka ilay izy kanefa afaka ataonao amin'ny sakafo rehetra .”
Maro ny olona no manaiky fa nohafarana avy any Azia ny saosy. Iza no mahalala raha misy tanàndehibe atao hoe Sriracha tokoa any?
Niresaka tamin'i Griffin Hammond aho, talen'ny lahatsary fanadihadiana fohy mitondra ny lohateny hoe Sriracha, izay miresaka ny tantara sy ny zava-miseho momba ny saosy misy sarin'akoholahy .
Ye ao amin'ny filma, nandeha tany Thailandy izahay mba hamantatra ny tantara tany am-boalohany. Ny saosy, tsy fantatro izay momba azy tany Vietnam, fa mandranoka kokoa izy ao Thailandy, mamy be kokoa, misy fangaro isankarazany ary toa tahaka ny mety miaraka amin'ny zavatra hafa ihany koa izay manana fangaro mitovy aminy mazava ho azy.
Nohazavain'i Hammond bebe kokoa ny tantara niavian'ny Sriracha maoderina, izay nanomboka tamin'i David Trần, sy ny diany ho any Etazonia:
Tany Vietnam izy ary iray amin'ireo teratany Shinoa maro noroahana hiala ny firenena, izany hoe navoaka tao Vietnam izy taorian'ny ady, ary nalefa sambo, antsoina hoe Huey Fong.
Marihina fa Huy Fong Foods no anarana nomen'i David Trần ny orinasany taty aoriana .
Nampahatsiahy i Hammond :
Nisy mpitady fialokalofana miisa 3.300 tao anatin'io sambo io, ary farany iray volana taty aoriana niainana tao anaty sambo, nilefitra i Hong Kong, namela azy ireo hijanona fotoana kely ihany, ary namindra toerana ireo olona rehetra ireo ny Firenena Mikambana, ary mihevitra aho fa maro tamin'izy ireo no lasa tany Etazonia .
Tonga tao Boston aloha i David Trần tamin'izany fotoana ary tsy nanana na dia dolara iray tamin'ny anarany izy saingy nahita lalana nankany Los Angeles taty aoriana.
Nanohy i Hammond :
Nitady asa izy ary tsy nahita izay tena tiany rehefa tonga tany, kanefa nahita fa marobe ireo olona Vietnamiana izay nitady sy nihinana phở fa tsy nanana saosy masiaka izy ireo, tahaka izay tany an-tanindrazana, ary nahita tsena tao izy ka nieritreritra hoe: ‘afaka manamboatra saosy masiaka’ aho ary tahaka izany no nanombohany nanao Sriracha.
Naorina tamin'ny taona 1980 ilay orinasa kely Trần ary miroborobo sy mivelatra ankehitriny.
Misy ny orinasa lehibe iray ao Irwindale amin'izao fotoana izao, ao atsinanan'i Los Angeles, manamboatra ny saosy masiaka ankafizin'ny olona rehetra ho an'izao tontolo izao. Raha ny marina, raha tianao, afaka mandeha mijery any ianao ary manao fitsidihana hanamarinana izany.
Sarotra ny tena hamantarana ny fototra niavian'ny Sriracha. Andao ho fintinina: Manana mpialokaloka Shinoa-Vietnamiana isika, izay nanomboka nivarotra ny saosy rehefa tonga tany Etazonia. Nalaina avy amin'ny saosy Sriracha Thailandy ilay saosy saingy tsy tena mitovy ny tsirony.
Noho izany, angamba … mety ho karazana fangaron'ny kolontsaina rehetra ny Sriracha? Sakafo tena feno fifangaroana ?
Tena manitikitika ny saina ny mieritreritra ilay izy, ary misy dikany eo amin'ny sehatra maneran-tany, indrindra fa rehefa nivoaka ny sisintany ireo hevitra sy sakafo. Ary ny zavatra nazava momba ny fanatontoloana dia ny hoe haingana dia haingana ny nampalaza azy na dia tsy nivarotra ny Sriracha tany Vietnam aza i David Trần .
Nanazava i Victor Nguyễn izay nanao ny asam-pihariana tany Azia,
Niverina tany Vietnam aho ary nandeha tany Azia angamba indray mandeha na indroa isan-taona teo ny fandaharam-potoanako, ary nahatsikaritra aho tato anatin'ny taona vitsivitsy fa, isaky ny mametraka hafatra ao amin'ny Facebook na indraindray amin'ny mailaka manontany ireo namako raha mitady zavatra avy any California, na avy any LA izy ireo, dia saosy Sriracha no valiny voalohany. Saosy Sriracha avokoa ny entako iray manontolo tamin'ny diako teo aloha, izay nandehako tamin'ny Septambra . Raha tsy diso aho dia nisy 15 tavoahangy teo tao amin'ny entako.
Tena tsy vazivazy ilay 15 tavoahangy. Raha ny marina, nahatonga ny Sriracha ho tena saosy manerantany feno fitiavana Vietnamiana ity fifangaroana kolontsaina ity. Ka inona no tsara kokoa noho izany?
Na izany aza, taiza moa isika teo? Ah marina izany, nankafy ny bánh mi aho. Miaraka amin'ny Sriracha, mazava ho azy. Fa momba izay, mety hanontany ity fanontaniana manitikitika ity ihany koa aho: “Inona ny zavatra tena tianao ampiarahana amin'ny Sriracha ?”
Namaly ilay mpandroso sakafo hoe: “Ah … pizzas, angamba.”
He, tena tsara izany. Kanefa mihevitra aho fa tonga ny fotoana tsy hanelingelenana intsony ireo mpiasa aloha. Efa feno olona hisakafo hariva ny toerana .
Henoy ny podcast momba ny Sriracha:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/30/92554/